DAINIK SANJAL VIDEO: श्रीहजुर म तिम्रै हुँ, अरु कसैको हुन सक्दिन ! बिबाह गरेको एक महिना पछि हामी हनिमुन मनाउन भन्दै भारतको अस्पतालमा उपचार गर्न गएका थियौ किनकी दर्शकको मन दुखाउनु श्रीको मनासाए थिएन ! मन थामेर हेर्नुहोला स्वेता खड्काको जीवन पिडा -हेर्नुहोस भिडियो सहित
श्रीहजुर म तिम्रै हुँ, अरु कसैको हुन सक्दिन ! बिबाह गरेको एक महिना पछि हामी हनिमुन मनाउन भन्दै भारतको अस्पतालमा उपचार गर्न गएका थियौ किनकी दर्शकको मन दुखाउनु श्रीको मनासाए थिएन ! मन थामेर हेर्नुहोला स्वेता खड्काको जीवन पिडा -हेर्नुहोस भिडियो सहित
Posted by Dainiksanjalvideo at 4:39 AM